uwoyela turpentine noma turpentine, iwumkhiqizo wemvelo - umphumela ziphuzo zazihluzwa of turpentine (AmaConifers rosin) nge umusi. Ukuqoqa ubisi, okwenza ku emagxolweni esihlahla sihlahla namantombazane ambalwa. Lolu ketshezi okunamathelayo ocebile izakhi - e amafutha ethile ebalulekile. Turpentine iqukethe mayelana 18% ke.
Ukuhlanzwa uwoyela turpentine isetshenziswa kwezokwelapha emakhulwini amaningi eminyaka adlule - ukugaya nokuhlanganisa ukulungiswa turpentine nokugeza. Le into nge isici okunoshukela iphunga zingaxazululeki emanzini futhi yakha ifilimu elincanyana phezu ubuso bayo, ukuhlinzeka liyithinta ngokuqondile esikhumbeni. ukwakhiwa okubalulekile turpentine zokugeza ngokuthi "amhlophe" noma "emulsion ophuzi" angathengwa at Pharmacy ezikhethekile ezitolo inthanethi. turpentine futhi Wamafutha okuthengiswa ekhemisi: it ikhiqizwa amashubhu 25 noma 30 g in dark ingilazi izimbiza for 20 noma 25 g.
Wamafutha ngesisekelo turpentine, libhekisela eqenjini non-steroidal izidakamizwa eqeda ukuvuvukala. It has a analgesic abalulekile (ubuhlungu killer) isenzo - ikakhulukazi ngenxa yokucasuka kwesikhumba, okuyinto kokuthikamezeka. Turpentine wamafutha (ngesandla echaza) futhi kunemiphumela eqeda ukuvuvukala, okuvumela inflow legazi ukufudumala endaweni ubuhlungu. Libuye isinqandakuvunda, njengoba asebenzayo zako ezisemqoka isithako, turpentine, inhlanganisela amafutha abalulekile banezimfanelo izakhiwo elwa namagciwane.
Turpentine wamafutha (ngesandla lichaza izimpawu ukusetshenziswa kwaso) kusetshenziswa khona uhlelo okubi kakhulu izifo ngisho namalungu ubuhlungu bemisipha - arthralgia, myalgia, rheumatism kanye radiculitis, neuralgia kanye neuritis bemvelo ahlukahlukene. Ukusetshenziswa Its yezifo oyingozi futhi ezingalapheki zokuphefumula futhi uletha impumuzo enkulu. Ngakho, turpentine wamafutha lapho ukhwehlela isetshenziswa esifubeni (ngaphandle esifundeni inhliziyo kanye ingono) futhi emuva. isikhumba ebucayi kungaba ayinawo amafutha elicwengiweyo buhlanjululwe in a isilinganiso 2: 1. Nge oqinile turpentine abandayo okugcoba wagcoba futhi izinyawo ke wagqoka amasokisi. Ngaphezu kwalokho, ithuluzi esetshenziselwa ephefumula: selithambile isifuba esomile kanye has isinyathelo expectorant.
Turpentine wamafutha (umsebenzisi unaka ngokukhethekile kule!) Ingabe azenziwanga isikhumba ezilimele, ke ukusebenzisa kwayo kungavunyelwe hhayi kuphela e nemihuzuko noma ukusikeka, kodwa futhi ngoba iningi izifo zesikhumba, kuhlanganise nohlobo nomzimba. Yena, njengezinye ukufudumala wamafutha akufanele isetshenziswe ashisa oluphakeme emzimbeni. Leli thuluzi is contraindicated ku isibindi nezinso. Ngaphezu kwalokho, turpentine wamafutha (ngesandla isho lesi) alisetshenziswa uma hypersensitivity isiguli ukuba amafutha turpentine ngenxa ingozi komzimba. Esimeni emva isicelo esivuthayo ukuzwa eqinile noma yokungezwani komzimba kumelwe asuse izinsalela namafutha usebenzisa ithawula iphepha, lokusula isikhumba sakhe. Uma kudingeka, kufanele xhumana nodokotela ukuqokwa antihistamine. Uma emva isicelo turpentine wamafutha waphawula isiyezi, palpitations inhliziyo noma iconsi wegazi, shayela "ambulensi": lawa izimpawu wena hypersensitive emuthini, kuyingozi ngoba impilo isiguli.
Turpentine wamafutha phakathi nokukhulelwa kanye lactation nayo contraindicated, kusukela elihambisana zokwelapha azikaze olwenziwa, futhi ulwazi mayelana ngabe ludlulele ngaphakathi ubisi lwebele futhi ngokusebenzisa yi-placenta, kukhona namuhla. Akubalulekile ukusebenzisa futhi ekuphatheni izingane, kodwa abazali abaningi indiva lesi siphakamiso. Ngokucophelela ingane isikhumba kalula ashise lokhu kusho, Ngakho-ke, i-ukwelashwa okufanele ezinganeni kungcono ukusebenzisa ezinye izingoma ukufudumala.
Nomuthi 'Viferon' (ikhandlela). Ukubuyekeza, izincazelo, izinkomba
Suppositories Rectal "Buscopan" ngesikhathi sokukhulelwa
Ikhaya usizo lokuqala kit - ngokudingeka ekhaya lakho